Zambia Liaison Officer kuUNWTO inounza ruzivo kuAfrican Tourism Board
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Nhau Nhau » Zambia Liaison Officer kuUNWTO inounza ruzivo kuAfrican Tourism Board
Nhau Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • nhau • vanhu • Dhinda Zviziviso • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Zimbabwe Breaking News
Dr. Ngwira Mabvuto Percy, Munyori Wokutanga Wekushanyirwa neZambia weLiaison Officer kuUNWTO, anogara kuAfrican Tourism Board (ATB), achishanda senhengo yeStering Committee.
Nhengo itsva dzebhodhi dzave kujoina sangano kusati kwatanga nyoro kuendeswa kweATB kunoitika neMuvhuro, Mbudzi 5, kumaawa mazana gumi nemana panguva yeWorld Travel Market muLondon.
200 vatungamiriri vepamusoro vevashanyi, vanosanganisira makurukota anobva munyika zhinji dzemu Africa, pamwe naDr Taleb Rifai, aimbova Secretary General weUNWTO, varongerwa kuenda kumusangano kuWTM.
Click pano kuti uwane zvimwe pamusoro pemusangano weAfrica Tourism Board musi waNovember 5 uye kunyoresa.
Dr. Ngwira Mabvuto Percy mushandi wehurumende ane ruzivo, mumiriri, ane hunyanzvi uye ane hunyanzvi hwekushanya. Ane makore anopfuura gumi neshanu ezviitiko zvebasa mundima yekushanya uye anopfuura makore mashanu 'muhukama hwehukama nehwekunze. Huzivo hwake hwehunyanzvi uye kusimudzira basa zviri zvese padanho remuno nepasirese.
Muhupenyu hwake hwehunyanzvi uye hwekuita basa makore apfuura, Dr. Ngwira anga ari Professional Tourism Practitioner, Diplomat, chipangamazano, Mudzidzisi uye Key Advisor kune veMakurukota eVashanyi, nevamwe maHurumende eVakuru pazvinhu zvekushanya, kudyidzana nedzimwe nyika, kudyidzana uye nyaya dzeUNWTO . Mudzidzi ane rakaburitswa rezvedzidzo anoshandira zita rake Dr. Ngwira ane PhD mu Tourism Management (Spain), MA muDiplomatic Studies (United Kingdom), MSc. muInternational Rural Development ine hunyanzvi mu Tourism Management (United Kingdom), BA muHotera, Tourism uye Catering Management (Hong Kong SAR, China) uye diploma muHotera uye Tourism Management (Zambia).
Sevashandi vehurumende uye mumiriri, chiono chaDkt Ngwira ndechekukurudzira kuvandudzwa nekuzadzikiswa kwemitemo yakanangana nekusimudzira budiriro iyo inobatsira mukusununguka kwehupfumi hwevanhu pasocial nemunyika dzese muZambia nedzimwe nzvimbo dzepasi.
Kuve nyanzvi yezvekushanya Dr Ngwira vanotenda kuti kushanya kwakakosha mukufambisa kwehupfumi pamwe nekusimudzira, zvine chekuita nekuderedza hurombo, kuunza mari, kugadzira mabasa, kudyara, kuvandudza zvivakwa, nekusimudzira kubatana kwevanhu. Iko kushanya kune simba rekusimudzira uye kuita mupiro unokosha mukusimudzira kwese pasi.
Parizvino, Dr. Ngwira vanogara kuZambia Embassy muParis, France, vachishanda saMunyori wekutanga anoona nezve Tourism uye semukuru weZambia weLiaison kuUNWTO.
PAMUSORO PEMAZUVA E AFRICAN TOURISM
Yakatangwa mu2018, iyo African Tourism Board (ATB) isangano rinozivikanwa pasi rese nekuita sechinhu chinokurudzira budiriro yekusimudzira mafambiro nekushanya kuenda nekubva kunharaunda yeAfrica. Iyo African Tourism Board chikamu che International Mubatanidzwa weVashanyi Partner (ICTP).
Mukubatana nenhengo dzakazvimirira uye dzeruzhinji, ATB inowedzera kukura kwakasimba, kukosha, uye mhando yekufamba uye kushanya kune, kubva, uye mukati meAfrica. Sangano rinopa hutungamiriri nemazano pamunhu uye mubatanidzwa kumasangano enhengo dzayo. ATB iri kukurumidza kuwedzera mikana yekushambadzira, kudyidzana neruzhinji, kudyara mari, kushambadzira, kusimudzira, nekumisikidza niche misika.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve Africa Tourism Board, tinya pano. Kubatana neATB, tinya pano.